Mety mahasoa anao: Ahoana ny fanamboarana prise terre
Fampahafantarana ahafahanao manara-maso ny asa ihany no omena eto, mangalaha hatrany matihanina raha tsy hainao fa mahafaty ny resaka herinaratra.
Inona ny antsoina hoe Prise terre, inona no ilana azy?
Ny prise terre dia tena ilaina ho fiarovana ny ain'ny mpampiasa sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny herinaratra.
Raha tsiahivina dia ny herinaratra tonga ao amintsika raha Jirama, dia 220V courant alternatif, izany hoe misy fil iray Phase (io no mitondra courant, na ilay mirehitra ny tourne-vis testeur), ary ny iray Neutre, io raha kasihina tsy misy courant.
Mitovy tsy misy valaka ihany koa raha mampiasa panneau solaire misy Convertisseur, ka efa lasa courant alternatif 220V ilay courant continu 12-18V novokarin'ny Panneau solaire.
Rehefa mampiasa fitaovana somary lehibe anefa dia mety misy fuite courant amin'ny vatan'ilay fitaovana, na courant direct na champ magnétique na courant électrostatique, ohatra ireny fatana resistance ireny, Bouilloire, chauffage électrique, machine à laver, lave vaisselle, micron onde, frigidaire...
Raha mikasika azy izany isika dia mety misy courant ilay vatan'ilay fitaovana.
Mba hialana amin'izay izany, dia mila io prise terre io isika, izany hoe ilay courant mety mandeha any amin'ilay vatan'ilay fitaovana tsy mandeha any amin'ny vatatsika, fa sitonin'ny tany.
Azo asiana io prise terre io ihany koa ny vatan'ny baignoire misy vy, na ny réseau tuyau ndrano na piscine. Ka raha sanatria misy courant mandehandeha any dia misy fiarovana.
Fantatra io prise terre io amin'ny lokon'ny Fil mavo sy maitso. Fadio izany ny mampiasa io fil terre io amin'ny zavatra hafa, satria hifangaro ka hitera-doza, raha sanatria ny Phase misy courant no lasa any amin'ny tany. Aza mampiasa fil loko hafa izany.
Ny habean'ny Fil ampiasaina prise terre dia mitovy amin'ny fil ampiasaina, ohatra asiana Terre ny prise courant, izay Fil 2.5mm² no ampiasaina dia atao 2.5mm² ihany koa izany io fil terre io.
Raha mahita Cable misy fil 3 ao anatiny izany vao maika tsara, 3x2.5m², ka ny fil fahatelo dia tsy maintsy ilay mavo sy maitso. Raha tsy mahita an'iny na somary lafo iny, dia mividiana cable 2x2.5mm² dia tarito mitokana ilay fil 2.5mm² mavo sy maitso.
Misy jiro miaraka amin'ny abat-jour misy Terre ihany koa, dia alefa mivantana amin'ilay vatan'ny abat-jour na lustre izany ilay fil 1.5mm² mavo sy maitso, raha 2x1.5mm² ny cable ampiasaiana amin'ny jiro.
Tsy mandalo disjoncteur na interrupteur izany ny Prise Terre fa avy dia mandeha mivantana amin'ny prise na amin'ny jiro izay mila izany. Apetaka amin'ilay prise misy vy mivoaka ety ivelany iny ny prise terre (Fil mavo sy maitso), raha apetaka amin'ilay lavaka ankavia raha manatrika ilay prise ianao ny Neutre (na fil mainty na marron), ary amin'ny lavaka havanana kosa ny Phase (fil mena na manga).
Ny courant dia mitady andeha aingana hatrany, ka ny zavatra kely resistance no andehanany aingana, ny tany izany dia tokony latsaky ny 100ohm ny resitance-ny mba ho tsara ny prise terre. Ny vatatsika olombelona ambonin'izay, ka raha mikasika courant misy prise terre izany, dia lasa any amin'ny tany aingana kokoa ny courant, fa tsy mitazona ela ny vatan'olombelona.
Ahoana ny fanamboarana ny Prise Terre.
- Piquet en acier galvanisé na en cuivre varahana, mirefy 1.20 - 1.50m eo
- Barrette de coupure na Barrette de mesure
- Fil en cuivre tsy misy foniny 25mm² ny habehany
- Conducteur principal de terre, gaine mavo sy maitso misy fonony 16mm²
- Vovoka saribao
- Sira vaingany 5kg eo
Aty ivelan'ny trano no anaovana azy.
- Mangadia lavaka omby lelan'angady 30 x 30cm mirefy 1m eo ny alaliny. Atsatohy eo ilay Piquet, domy amin'ny marteau hiletika ho safo vavany ny ety ambony.
Ararao ilay vovoka saribao 10cm voalohany, raha tsy nahita vovony, dia mividiana saribao, dia kapohy halemy madinika. Tsindrio sira 10cm, dia asio saribao indray 10cm, dia asio sira 10cm, dia raraho farany ny saribao 10cm; ataovy tany amin'izay hatreo amin'ny 20cm farany, dia rakofy beton hatramin'ny safovavany (vatokely 3 famarana + fasika 2 famarana + ciment 1 famarana), béton indroan'ny tapaka bidon mavo dia efa ampy.
- Apetao amin'ilay Piquet de terre ilay Fil varahana tsy mifono 25mm², ataovy 50cm eo.
- Apetao mitsangana amin'ny rindrina ilay Barette de coupure, tandremo fa mora vaky ilay bakoly fa aza terena mafy be.
- Apetao ilay fil 25mm² avy aty ambany, ary ilay fil mifono 16mm² apetaka aty ambonin'ilay Barrette de coupure, ary taritina hatrany amin'ny tableau électrique, dia any no mizarazara amin'ny izay ilaina any an-trano, na ho 2.5mm² raha fil prise courant, na ho 1.5mm² ny habean'ny fil raha ampiasaiana asiana Terre ny jiro izay mila izany.
Azo asiana regard ilay miseho ety ivelany. Tsy misy courant atahorana akory io. Rehefa misy fuite courant kosa dia mety hisy courant izy. Ka tsy tsara atao akaikin'ny toerana azon'ny ankizy lalaovina kosa.
Ahoana ny amantarana fa tsara ny Prise terre (Test)
Rehefa vita ny installation, dia mangalaha multimètre,
Raha tester amin'ny Voltmètre (position AC 700V ny multimètre), dia tokony ho akaikin'ny ZERO (0V) ny Neutre sy ny Terre, ary manome 220 V kosa ny Phase sy ny Terre.
Io izany no manazava fa ny mahavoa ny olombelona courant, satria ny tanany mikasika phase, ny tongony mifanday amin'ny tany izay misolo ny Neutre, izy tsy mikiraro, dia lasa izy izany no misolo ny ampoule mirehitra, ka raha tsy maina makina vao tsy misy courant mandalo intsony, ka izay ilay mahafaty. Ny fo sy ny tratra tsy mazaka ny courant mandalo aminy.
Ny vorona, voalavo, bibikely dia tsy tratran'ny courant satria fil iray ihany no kasihany, fa tsy mikasika Neutre na Terre sy Phase miaraka izy, ary kely ny resistance amin'ny tongony, na ny vavany mihinana ilay fil.
Tsy ampy iarovana tanteraka ny courant anefa io Prise terre io, fa tsara foana asiana disjoncteur differientiel 30mA - 25A ny tête de réseau électrique, izany hoe afaka ny disjoncteur principal Jirama na Panneau solaire, dia ampidirina amin'io disjonteur différentiel 30mA io aloha, izay vao zaraina amin'ny disjoncteur divisionnaire na modulaire isaky ny prise na jiro tiana zarazaraina. Ilay 30mA izany eto dia sensibilité amin'ny fuite de courant, fa ny 25A kosa dia tanjak'ilay disjoncteur ahazaka fitaovana hatrany amin'ny 25A, izany hoe mahazaka Puissance= U x I = 220V x 25A = 5 500 Watts.
Ny fer 1100w, fatana 1000W, Bouilloire 900W, Chauffage 2000W... raha indray miaraka mirehitra.
Ny ahafantarana ilay disjoncteur differentiel dia samy tapahany ny Phase sy Neutre ary misy bouton testeur T izy, ka tsindraindray mba tsindriana io ahitana raha tena mbola miasa. Ka raha sendra mahakasika courant isika, dia mi saute io differentiel io, satria nahita tension 30mA nandehandeha izy.
Raha mampiasa jiro somary matanjaka, toy ireny amin'ny atelier ireny, dia mitsambikina foana io disjoncteur 30mA io, fa 300mA ampiasaina, fa mila mitandrina izany satria tsy mora mipika izy.
Afaka manampy anao hatrany ny Vitatsika Construction amin'ny fanamboarana na fanavaozana ny tranonao manerana ny Nosy.